गुल्मी अपडेटः पहिरोमा पुरिएर ११ जनाको मृत्यु - Nepali Online News Media-shikharnews.com
गुल्मीमा पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुगेको छ । २ जना अझैं बेपत्ता भएका छन् । सत्यवति गाउँपालिकाका २ वटा वडाका ३ घर पहिरोमा पुरिँदा ११ जनाको मृत्यु भएको हो ।
वडानम्बर ४ मा पर्ने लिम्घामा एकै घरका ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने वडानम्बर ३ को ठूलो लुम्पेकमा ३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
लिम्घामा मृतक मध्ये ६ जनाको शव बाहिर निकालिएको छ । अन्य २ जनाको शव निकाल्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
लिम्घामा मृत्यु भएका एकै घरका ६५ वर्षीय छल्ली बिक, २८ वर्षीय कम्बु बिक, २५ वर्षीय निर्मला बिक, १२ वर्षीय अंजली बिक, १० वर्षीय हेमन्त बिक, ७ वर्षीय शिवानी बिकको शव बाहिर निकालिएको प्रहरी जनाएको छ ।
वडानम्बर ३ को ठूलो लुम्पेक कसिन डाँडा पहिरोमा पुरिएर ३२ वर्षीय तिलकुमारी त्रामु, ९ वर्षीय दर्शन त्रामु र पहिरोबाट बच्न भाग्ने क्रममा ६३ दुर्गाबहादुर सिंजाली मृत्यु भएको छ ।
पहिरोमा परेका ८ वर्षीया तारा बिक र ६ वर्षीय सुमन बिकको शव भने निकाल्ने कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्र खड्काले बताए ।
ठूलो लुम्पेमै रुद्र बिकको घर पनि पहिरोले पुरेकोे छ । पहिरोमा परी ४० वर्षीया मायाँ बिक र १६ वर्षीय गबि बिक बेपत्ता भएका छन् । अन्य २ जना घाइते भएका छन् ।
घाइते हुनेहरुमा सत्यवति(४ का १० वर्षीय करिश्मा त्रामु र १३ वर्षीय धनि त्रामु रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
उद्धारका लागि प्रहरी नायव उपरीक्षक मिनबहादुर घले, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक दिनेश रामयमाझीसहितको टोली खटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए ।
पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा डाक्टरसहितको स्वस्थ्य टोली पनि पुगेको छ । पहिरो ठूलो भएकोले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ ।
पहिरोका कारण ठूलो लुम्पेकको करिब २ सय घर जोखिममा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालले बताए ।
सिङ्गो गाउँ नै पहिरोको प्रभावित रहेकाले संख्याको आकंलन गर्न सकिने अबस्था नरहेको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
घरहरु जोखिममा रहेकाले स्थानीय विद्यालयमा बसिरहेका छन् । कुनै पनि समयमा पहिरो खस्ने डरले स्थानीय त्रसित हुँदै उनीहरुलाई खानपिनको लागि वडा कार्यालयले व्यवस्थापन गरेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा जिल्लाबाट र बुटवलबाट स्वास्थ्यसहितको उपचारको लागि खटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए ।
पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा जिल्लाबाट रेडक्रम, जिल्ला समन्वय समिति, नेकपाका जिल्ला स्तरीय नेता तथा कार्यकर्ताहरु प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारको लागि खटिएका छन् ।
घटनास्थल जिल्ला सदरमुकाम तम्घासबाट पूर्वतर्फ पर्दछ । घटना स्थल पुग्न करिब ३ घण्टा बढी समय लाग्छ ।
बोरिस जोन्सन बेलायतको प्रधानमन्त्री हुने
एजेन्सी । बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा बोरिस जोन्सन चयन हुने निश्चित प्रायः भएको छ । सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको नेतामा विजयी हुने भएपछि उनी बेलायतको प्रधानमन्त्री हुने भएका हुन् ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको स्थान लिने जोन्सनले प्रतिष्पर्धी जेरेमी हन्टलाई पछि पारिरहेको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । केही समयभित्र कन्जरभेटिभ पार्टीको नेताको चुनावको नतिजा बाहिर आउँदैछ ।
जोन्सन नै प्रधानमन्त्रीका प्रबल दाबेदार थिए । लन्डनका पूर्व मेयर जोन्सन अनुभवी नेता हुन् ।
छानविन समितिको कार्यशैलीबाट प्रम ओली असन्तुष्ट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताको छानविन सम्बन्धमा गठन भएको समितीको कार्यशैली उपयुक्त नभएको बताएका छन् । प्रतिष्ठानको तेस्रो सभा बैठकलाई आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको बिषयमा सरकारले जेठ ३० गते एक समिती गठन गरेको थियो । समितीको हवाला दिंदै प्रतिष्ठानकी उपकुलपति प्राध्यापक डा.संगीता भण्डारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समितिले कुलपतिलाई बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन विभिन्न सञ्चार माध्यममा देखिनु उचित नभएको बताए । ‘समितीले प्रतिवेदन सबभन्दा पहिला कुलपतिलाई बुझाउनु पर्ने हो तर यो सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा बुझाए जस्तो छ’ प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो प्रतिवेदन हो कि राजनीति हो ? समितिमा हुने सदस्यहरु छानविन गर्न कि राजनीति गर्न जानु भएको ? जिम्मेवारी लिनेहरुले आफ्नो कर्तव्य र दायित्वलाई ख्याल गर्नु पर्दछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनको विश्वसनियतामा प्रश्न उठेको बताएका छन् । ‘प्रतिवेदन कुलपतिलाई बुझाउनु भन्दा पहिला अन्यत्र बुझाएर दबाब सृजना गर्न खोजिएको छ तर त्यस्तो दबाबमा म पर्दिन । सत्यतथ्य बुझेर मात्र अघि बढ्छु ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
काठमाडौं। आईसीसी टि ट्वान्टी विश्व कप छनोटको एसिया फाइनलमा नेपालले प्रतियोगिता हारबाट शुरआत गरेको छ । मंगलबार सिंगापुरमा नेपाल कतारसँग ६ विकेटले पराजित भएको हो।
टस जितेर पहिला ब्याटिंग गरेको नेपालले ९ विकेटमा १२२ रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिंग गरेको कतारले ६ विकेट गुमाएर १९ ओभर ४ बलमा १२४ रन बनायो।
कतारका इनाम उल हकले ४१ रन बनाएपछि नेपाल अप्रत्यासित हार व्यहोर्न पुगेको हो।
नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले ३३ रन दिएर ३ विकेट लिएपनि अन्य बलरले उनलाई राम्रो साथ दिन सकेनन्।
कतारका दुईजना ब्याट्सम्यान रनआउट हुन पुगेका थिए भने एक विकेट करण केसीले लिएका थिए।
नेपालको ओपनिंग जोडीले कीर्तिमानी ४९ रन जोडेपनि त्यसलाई मध्यक्रमले पूजिँकृत गर्न नसक्दा नेपालले चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिन सकेन।
ओपनर कप्तान पारस खड्का र उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पहिलो विकेटका लागि ४९ जोडेका थिए। खड्काले २८ रन बनाए भने मल्लले २३ रन बनाए । नेपालका लागि सर्वा्धिक रन दिपेन्द्रसिंह ऐरीले ३३ रन बनाए। अन्य ब्याट्सम्यानले राम्रो ब्याटिंग गर्न नसक्दा नेपाल कमजोर मानिएको कतारसँग पराजित हुन पुगेको हो।
यो खेलमा पराजित भएसँगै उपाधि जितेर ग्लोवल छनोट खेल्ने नेपालको लक्ष्यमा झट्का लागेको छ। अब नेपालले बाँकी ३ खेलमा नेट रनरेट सुधारसहित जित हात पार्नुपर्नेछ । ५ टिम सहभागी प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने टिमले ग्लोवल छनोट खेल्न पाउनेछ । पाँच टिम मध्ये नेपाल र कुवेतमात्र हालसम्म जितबिहीन छन्। नेपालले बुधबार मलेसियासँग खेल्नेछ।
साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटको मुल्य बढ्ने भनिए पनि अन्ततः इन्टरनेको मूल्य नबढ्ने भएको छ। तारबाट चल्ने इन्टरनेटमा विभिन्न सहुलियत दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेसँगै इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने भएको हो ।मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार नियमावली संसोधन गर्दै मर्मतलगायत खर्चमा सहयोग गर्ने भएपछि इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने भएको इन्टरनेट व्यवसायीले जनाएका छन्। यस अघि उनीहरूले साउन १ देखि मूल्य बढाउने घोषणा गरेका थिए।
सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत भ्याटमा सरकारले ५० प्रतिशत र व्यवसायीले ५० प्रतिशत व्योहोर्ने गरी नियमावली संसोधन भएकोले अब इन्टरनेटको शुल्क बृद्धि नहुने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठनका अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिए। भट्टका अनुसार नियमावली संसोधन भएका कारण अब इन्टरनेटको मुल्य वृद्धि नहुने भएको हो ।
गएको आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने सरकारले नियम ल्याएपछि १३ प्रतिशत कर उपभोक्ताको बिलमा थप्ने तयारी सेवा प्रदायकले गरेका थिए।
सरकारले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट–लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको हो। इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट मर्मतसम्भार शुल्क बापत महिनामा पाँच सय रुपैयाँ बढी लिने गरेका छन्।
त्यस्तै शुरूमा राखिने राउटर तथा लिज शुल्कलाई पनि आयभन्दा फरक राखी दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने गरेको छ।
निर्मला पन्त प्रकरणमा गृहमन्त्रीले किन यस्तो अभिव्यक्ति दिए ?
काठमाडौं। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकार मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न सफल रहेको दावी गरेका छन्। गृहमन्त्री थापाले सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई नियन्त्रणमा लिन सरकार सफल भएको दाबी गरे। उनले अति राजनीतिकरण गरिएका कारण निर्मल पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसकिएको तर्क गरे।
मंगलबार मन्त्रालयको एक वर्षको कामको समिक्षा र चालू आर्थिक वर्षको कामको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो हत्या प्रकरणको छानवीनको कामलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक अघि बढाइरहेको बताए। अति राजनीतिकरणका लागि सो घटनाको अनुसन्धान प्रभावित भएको गृहमन्त्री थापाको स्पष्टिकरण छ।
गृहमन्त्री थापाले बलात्कारका घटनामा नेपाल प्रहरीले ९५ प्रतिशत सफलता हात पारेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सो घटना भने अति राजनीतिकरणको शिकार भएको तर्क गरे। गृहमन्त्री थापाले निर्मला हत्या प्रकरणको छानवीनमा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गरे। उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न १८ सय ठेकेदारहरुको फाईल कार्वाहीका लागि अख्तियारमा बुझाइएको जानकारी दिए। विकास, निर्माणको काममा अनियमितता गर्ने ठेकेदारलाई सरकारले कडा कार्वाही गर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ।
प्रम ओली भन्छन् ‘म बिरामी होइन ’
सिधा कुरा जनता सङ्गका प्रस्तोता रबि लामिछाने पक्राउ